यी हुन् प्रदूषणले स्वास्थ्यमा पार्ने प्राथमिक र जटिल समस्या, कसरी बच्ने ? - Health Today Nepal
यी हुन् प्रदूषणले स्वास्थ्यमा पार्ने प्राथमिक र जटिल समस्या, कसरी बच्ने ?
April 30th, 2019 स्वास्थ्य विशेष0comments
काठमाडौ,बैशाखः काठमाडौंलगायत देशका धेरै सहरमा वातावरण प्रदूषण छ । धुलो–धुवाँका कारण हुने यस्तो प्रदूषणले छातीसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखापर्ने गरेका छन् । विशेषगरी, चैत–वैशाखमा अत्यधिक सुक्खापन हुन्छ, यसले झनै प्रदूषण बढ्ने गरेको छ । वायु प्रदूषणको दीर्घकालीन असरस्वरूप स्वास्थ्यमा विभिन्न जटिल समस्या देखिने गरेका छन् । प्रदुषणले विशेष गरी सहरी क्षेत्रका मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याईरहेको छ । यस्ता छन्, प्रदुषणले स्वास्थ्यमा पार्ने असर र बच्ने उपायः
वायु प्रदूषणका कारण सुरु–सुरुमा भाइरल इन्फेक्सन, निमोनिया, एलर्जी र रुघाखोकीजस्ता समस्या देखापर्छन् । त्यस्तै, पछिल्लो समय श्वासप्रश्वास र दमका बिरामीको संख्यासमेत बढेको पाइन्छ । छाती कसिएको जस्तो हुने, सास फेर्न ग्राहो हुने, चाँडै रुघाखोकी लाग्ने, र नाक बन्द हुनेजस्ता लक्षण देखापरेमा सतर्क रहनुपर्छ ।
प्रदूषित वायुमा केमिकल र सल्फर अक्साइड ग्यास हुने भएकाले अधिकांशमा दमको समस्या देखिने गरेको छ । यसको असरले लामो समयसम्म खोकी लागिरहने र निको नहुने हुन्छ । त्यस्तै, छातीमा संक्रमण भई निमोनिया हुन्छ । यस्तो भएमा पछि गएर फोक्सोमा क्यान्सर हुने सम्भावनासमेत हुन्छ ।
प्रदूषित वायुका कारण दमका रोगीलाई सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ । बारम्बार अस्पताल गइराख्नु पर्नेजस्ता जटिलता थपिन्छन् । प्रदूषण र चिसोको सम्मिश्रणले बुढाबुढीमा मौसमी रुघाखोकी (भाइरल इन्फ्लुएन्जा) को समस्या बढी देखिने गरेको छ । खासगरी ६० वर्षभन्दा माथिका मानिसमा यस्तो समस्या देखिएको छ ।
लामो समय प्रदूषित वातावरणमा बस्दा दीर्घकालीन असरस्वरूप छातीमा संक्रमण भई क्रोनिक अस्ट्रटिज लङ डिजिजजस्ता निको नहुने रोग लाग्न सक्छन् । साथै, प्रदूषणले मुटुलाई समेत असर गर्छ ।
प्रदूषणबाट बच्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हो । धुलो–धुवाँबाट बच्न अनिवार्य रूपमा माक्स लगाएर हिँड्ने । विभिन्न संक्रमणबाट बच्न धेरै भिडभाडमा नजाने र खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै,आफूवरपरको वातावरण सधैँ सफा राख्नु प्रदुषणबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो ।
Previous article एकैपटक तीनवटा मेसिन बिग्रिएपछि अप्रेसन नै रोकियो ट्रमा सेन्टरमा
Next article अर्थोप्लास्ट रिह्याव सेन्टरमा फिजियो थेरापी गराउनेको भिड